Tonizia : Fampijaliana am-ponja natao an’ilay bilaogera sady mpanao gazety Slim Boukhdhir · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2019 3:53 GMT
Niharan’ny fampijaliana maro ilay bilaogera sady mpanao gazety Toniziana i Slim Boukhdhir, 39 taona, izay nogadraina tao amin’ny fonjan’i Sfax nanomboka ny 4 Desambra 2007. Nohelohin’ny fitsarana Toniziana i Slim Boukhdhir noho ny ‘’herisetra nataony tamin’ny mpiasam-panjakana iray am-perinasa’’ sy ny ” fanohintohinana ny fahamendrehana”.
Nilaza tamin’ny Global Voices ny vadiny, Dalenda Boukhdhir fa napetrak’ireo tompon’andraikitry ny fonja tao amin’ny ‘’efitrano maina’’ i Slim, nandritra ny telo andro, ny faha 20 ka hatramin’ny 23 Martsa (2008) , tsy nisy rano mihitsy tao amin’ity efitra ity. Vao mainka niha-ratsy ny fahasalamany noho io fepetra io, hoy ny vadiny. Nitatitra ny momba ny fepetra nitazonana ny vadiny tamin’ny Vokovoko Mena i Rtoa Boukhdhir ary nanantena izy fa ho afaka hitsidika azy any am-ponja ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Vokovoko Mena. Nanao fitokonana tsy nihinan-kanina maromaro i Slim Boukhdhir mba hanoherana ny fepetra fitazonana azy. Nofoanany izany tamin’ny 2 Febroary 2008 noho ny fangatahan’ny vadiny.
‘’Manitsakitsaka ny zon’olombelona ny fandraràna ny gadra tsy hahita ny fianakaviany sy ny fametrahana azy ao amin’ny toerana tsy ara-pahasalamana», hoy ny Reporters sans frontières. ‘’Niha-ratsy noho ny fepetra nitazonana azy ny tsy rariny natao tamin’ity mpanao gazety ity tamin’ny fanamelohana azy herintaona an-tranomaizina. Ny fanaovany fitokonana tsy nihinan-kanina no fomba tokana ho azy mba hisy hihaino’’.
Naverinay etsy ambany ny fanairana nataon’i Luiza Toscane, mpikatroka iray, navoaka tao amin’ny sehatra fifanakalozan-kevitry ny tranonkala Toniziana Nawaat.
Nosamborina ny 26 Novambra 2007 i Slim Boukhdhir. Nanomboka nibilaogy tamin’ny alalan’ny sehatra famahanana bilaogy Arabo Maktoob Blogs izy rehefa very asa tao amin’ny gazety Toniziana ‘’Akhbar AI Joumhurya’’ (Vaovaon’ny Repoblika) tamin’ny volana Aogositra 2004. Voajirika sy nopotehina ny bilaoginy tamin’ny volana Jolay 2007. Talohan’ny nisamborana azy, niasa ho mpitati-baovao ho an’ny tranonkalan’ny fantsom-pahitalavitra mandeha amin’ny zana-bolana Al-Arabiya TV i Slim Boukhdhir, sy ho an’ny gazety mpiseho isan’andro amin’ny teny Arabo ao Londres Al Quds Al Arabi ary ho an’ny vavahadin-tserasera Alema Qantara .